လက်တွေ့သူနာပြုအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ် – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / လက်တွေ့သူနာပြုအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 466 views
အစီအစဉ်, မူလတန်း, ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်နေ့စဉ်လူနာစောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုသြဒိနိတ်. သိပ္ပံနည်းကျမူဝါဒများထူထောင်နည်းလမ်းများရန်လိုက်နာမှုသေချာ, ဒေသခံ, နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုစံ.
ညှိနှိုင်းသို့မဟုတ်ဥပမာသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်သိကောင်းစရာများအစီအစဉ်များသို့မဟုတ် inservice လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများကျင်းပသိပ္ပံနည်းကျလုပျထုံးလုပျနညျး.
အသိပေးစာ, အင်တာဗျူး, နှင့်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်အသိအမှတ်ပြုရန်ခံစားနေရသူဆုံးဖြတ်ရန်.
တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ထိုကဲ့သို့သောကင်ဆာပညာရပ်အဖြစ်အထူးပြုအတွင်းအတွင်းလူနာတိုက်ရိုက်အထူးသဖြင့်ထောက်ပံ့, အာရုံကြော, သားဖွား, သို့မဟုတ်ကုသမှု.
လက်လီအစီအစဉ်များကိုဆက်ထိန်း, နည်းလမ်းများ, ရည်မှန်းချက်, သို့မဟုတ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို.
နို့တိုက်ကုမ္ပဏီစိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုး, ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်, မူဝါဒများ, မှတ်, သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
ရရှိ, လျှောက်ထား, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ကလေးအထူးကုများအတွက်အဖြစ်အထူးပြုတည်နေရာအတွက်စောင့်ရှောက်သူများသင်တန်း၏စံသတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, စူးရှသောကြောင်းစောင့်ရှောက်မှု , နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုကုသစောင့်ရှောက်.
တခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုမှသိပ္ပံနည်းကျအကြံပေးချက်များ Make, ဆေးသမား, အာမခံကုမ္ပဏီများ, ခံစားနေရသူ, သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်အေဂျင်စီများ.
အစီအစဉ်, ခန့်မှန်း, သို့မဟုတ်လူနာမှတ်တမ်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းရရှိသောအချက်အလက်များအပေါ် predicated ကုသမှု packages များပြုပြင်မွမ်းမံ, သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း, ခံစားနေရသူကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်.
ထိုကဲ့သို့သောစာမေးပွဲအဖြစ်ဒေသများရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြံပေး, တိုးတက်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေး၏တင်ဆက်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နာခြင်း, မသန်မစွမ်း, နည်းပညာများ, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု.
ရှိပြီးသားစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူစကားပြော, သို့မဟုတ်သူနာပြုအတွက်တိုးတက်မှု၏အသိပေးထားရန်စည်းဝေးကြီးများသို့မဟုတ်အထူးကုကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်.
ညီညွတ်မှုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်, တစ်ဦးချင်းစီသတင်းအချက်အလက်သုတေသနပြု, critiquing protocols များ, နှင့်အထူးကုထိန်းညှိတက်အဆုံးသတ်.
ဖြန့်ချိစီစဉ် clients များ execute.
ခံစားနေရသူ file မှအကောင့် Make’ စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ရပ်များ.
လူနာပပျောက်အပါအဝင်ဒေသများရှိကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစျေးသည်များမှ supply တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, လူနာစောင့်ရှောက်မှု, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
ဌာနဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များဆည်းပူးထိန်းသိမ်းနည်း, ကုသ, ရည်မှန်းချက်, သို့မဟုတ်သုတေသန-based နောက်ဆက်တွဲအကြံပေးချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ရှည်စောင့်ရှောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်အထူးကုရှုမွငျခ.
အသုံးဝင်မှုနှင့်နို့တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက devices များရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့် ပတ်သက်. style ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ applications များ.
ကုထုံးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင် layout လူနာ-ပညာရေးအစီအစဉ်များ.
၏ဦးဆောင်သူနာပြုဌာနခွဲ setup ကို, သို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်အတူ, လက်မှတ်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များ.
ကုသမှုဆုံးဖြတ်ချက်များထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်အသေးစိတ်ကိုနှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်မီးရထားလူနာ-ပညာရေး packages များ.
မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကုစားမညွှန်ကြားသဖြင့်မူလတန်းကုသမှု Give, differential ကိုကောက်ချက်ထူထောင်, အထူးပြုစာမေးပွဲကျင်းပ, သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ကွပ်မျက်.
အခြားအရှေးရှေးလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကိုတပြင်လုံးကိုအသိပညာပေး active-နားထောင်ခြင်း-ပေး, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး, စံပြအဖြစ်အံ့သြကိစ္စများ, နှင့်မလျော်ကန်သောအခြေအနေများမှာ mesmerizing မဟုတ်.
ညာဘက်ပြဿနာကိုပညာပေးသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာလတ်ဆတ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူဘို့ Techniques-အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောက်နေ coachingANDeducational ချဉ်းကပ်မှုနှင့်နည်းစနစ်များလေ့လာခြင်း.
ကုမ္ပဏီများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး-TrackingANDDiscovering စွမ်းဆောင်ရည်ကို, ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုဖန်တီးရန်.
သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့်လူမှု othersA တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အသိပညာသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-positive ပုဂ္ဂိုလ်များကူညီပေးဖို့နည်းလမ်းများရှာကြံ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း-ကိုစူးစမ်းရှုပ်ထွေးပြဿနာများနှင့်စိစစ်ရေးချိတ်ဆက်နဲ့ options ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများလျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များ critiquing.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ် execute ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏မျိုး.
အရစ်ကျ-Installing ထုတ်ကုန်, မော်ဒယ်များ, cabling, ကျန်တာတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
မြောက်မြားစွာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း encoding-Writing ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-အကဲခတ်ညွှန်းကိန်း, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်အခြားအညွှန်းကိန်းတစ်ခုပစ္စည်းလက်ရှိတွင်သင့်လျော်စွာလည်ပတ်နေသည်သေချာဖြစ်.
tools တွေသို့မဟုတ် devices များလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ-ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ.
လိုအပ်သောသောနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ပွငျ-ပြုပြင်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းအားသုံးသပ်ခြင်း-Completing စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, ကုမ္ပဏီများမှ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့.
systems လုပ်ငန်းစဉ်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုစစ်ဆင်ရေးများတွင်တိုးတက်မှုများလုပ်ဆောင်ရုံကိုဘယ်လိုသင့်ပါတယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ကိုစူးစမ်း, ပြဿနာများ, အဆိုပါ setting ကိုနှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကို impact ပါလိမ့်မယ်.
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းရင်းမြစ်-မြင်နေနှင့်အင်္ဂါရပ်များသင့်လျော်ပါသည်ဆီသို့ဦးတည်ရတဲ့၏စစ်ဆင်ရေး, devices များ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်.
လှုံ့ဆျောမှုဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-အဆောက်အအုံ၏စစ်ဆင်ရေး, သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ရှေးရှေး directing, task ကိုများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖျောထု.
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, မှတက်နှင့်အပါအဝင်4နှစ်ပေါင်း
အောင်မြင်မှု / ကြိုးစားခြင်း – %
ဆုံးဖြတ်ချက် – %